❤️ Maitiro ekubata maInfluencers pa Instagram - Facebook
Kana iwe uchida kupinda mukutaurirana nemabhuru makuru uye vanokurudzira mune yako niche pane Instagram, pane zvimwe zvinhu zvaunoda kuti uzive kuti usapfurwa.
Kune vanopfuura bhiriyoni vanoshandisa Instagram vashandisi, uye kana iwe uchida kuwana uku kudyidzana nemukurumbira mukuru kana mukurumbira brand, iwe uchafanirwa kumira pachena uye uve nechokwadi chekuti wanzwikwa. Instagram ndeimwe yedzakanakisa nzira dzekubatana nemamwe mabrand uye kuwedzera yako yemagariro midhiya uye bhizinesi kuvepo..
Ichi chinyorwa chiri pamusoro penzira yakanakisa yekutora kubata pfungwa dzevanhu uye kuvaita kuti vafare nezvekushanda newe.. Rangarira kuti mamwe e maakaundi makuru eakaundi vanogamuchira mazana emameseji zuva rega rega, saka zvakakosha kumira kunze uye kuvaturika ipapo.
Bata Brands Uye Vanofurira Pa Instagram
Kana iwe uchironga kuve nemhedzisiro kuma influencer maakaunzi, chero saizi yako kana saizi yeiyi, uchafanirwa kuita zvinotevera:
Target vanhu chaivo – hazvina zvazvinobatsira kutumira mameseji kuvanhu vasina hanya newe kana vasingaenderane nechiratidzo chako uye nehunhu hwako
Vaunzire kukosha – vanhu vazhinji vanotarisa pane zvavari kuyedza kuwana, pachinzvimbo chekutarisa pamabatiro avangaite kubatsira munhu wavanosvika
Bvuma kurambwa – iwe uchafanirwa kutumira yakawanda meseji uye mazhinji acho acharasikirwa nechavo, saka gadzirira kugamuchira kurambwa
Ramba wakazvipira – unofanirwa kuramba uchizviita uye usakanda mapfumo pasi, kunyangwe mukutarisana nekurambwa nguva dzose nekusaziva Zvino zvaunenge uine zano rekutanga rekuti ungaita sei, ngatipindei mune zvakadzama.
Kunongedza Vanhu Vakarurama
Kuti uwane mhinduro dzakanakisa, iwe uchafanirwa kunongedza maakaundi ayo ane hukama nezvako zvemukati. Isu tichangobva kuburitsa chinyorwa chekuti ungakurumidza sei kuwana maakaundi matsva mune yako niche., saka iverenge nekukurumidza kana iwe uchingoda yakawanda maaccount ekugadzirisa.
Iwe unogona zvakare kushandisa imwe yakadzama nzira, on kutsvaga hashtag kana nzvimbo inoenderana neyako niche uye kuongorora maakaundi imwe neumwe kuKutaurirana. Kuita saizvozvo, edza kusanetseka zvakanyanya nezve huwandu hwevateveri, asi panzvimbo pezvo tarisa pachiyero chekubata uye mhando yezviri mukati.
Panzvimbo pekutumira mazana emaMessage achikumbira chinhu chimwe chete ichocho, pachinzvimbo edza kutsvaga nzira yekuti neimwe nzira uwedzere kukosha kweiyi account. Zvinogona kuve nyore sekuvapa zvemukati, tumira ivo masampuli, kana kutovapa fomu yekusimudzira.
Iyi sarudzo yekupedzisira inogona kunakidza kana iwe uine nhamba hombe yevateveri vepamhepo pane mamwe mapuratifomu senge webhusaiti yako kana Facebook., asi kuti iwe unobuda pa Instagram. Vape iwo akawedzera kukosha pane kungovakumbira chimwe chinhu, uye iwe unogona kuona kuti idzi nhoroondo dzinosangana nezvinodiwa zvako zvirinani kwazvo.
Iwe uchafanirwa kutumira yakawanda meseji usati waenda chero kupi, uye pachave nekurambwa kwakawanda uye kunyangwe zvimwe zvinofuratirwa. Chinhu chikuru hachisi chekutora pachako, unogona kunge wakaagamuchira panguva yakaipa kana, kana vakagamuchira meseji zhinji, vangave vasingaone maneja wako mukuru. Edza kutamba nenhamba uye usarega kurambwa kuchikukanganisa, zvinotora nguva vanhu vasati vatanga kupindura kwauri.
Kutevera chikamu chakapfuura, iwe uchafanirwa kutumira yakawanda meseji uye chakanyanya kukosha chinhu chaungaite kugara uchiita zviitiko zvako. Ungangoda kutumira mameseji zana munhu asati apindura chikumbiro chako, kana kuti kunyange 1000, asi hazvina basa nekuti zvinowanzoitika kumagumo.
Chinhu chakanaka ndechekuti, ndipo paunenge wawana kudyidzana muhombodo, unogona kuishandisa kuti zvikunakire kuwana vamwe. Unogona kutaurira vatengi vako : “Ndiri kushanda nemutengi uyu pachirongwa ichi, Ini ndanga ndichitarisira kuti newewo ubatanidzwe”.
Inogona kuve mukuru kutaurirana uye inogona kukuita iwe unofarira vanhu vazhinji., chii chingave chando chebhora mumabasa ako ekubatanidza.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramInstagram Hashtag Tsvaga Chishandiso
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramMaitiro Ekuziva Kana Mumwe Munhu Akakudzivirira Iwe Pa Instagram